သောကြာနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ တူရကီနိုင်ငံ မအောင်မြင်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုအပြီး အစိုးရက ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ စစ်သားနဲ့အရာရှိပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော် ပါဝင်တယ်လို့ အစိုးရအရာရှိတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီကြံစည်မှု ဘာကြောင့် ကျရှုံးခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Jamie Dettmer ရဲ့ ရေးသားချက်အပေါ် အခြေခံပြီး ဦးကျော်ဇံသာက တင်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတ Erdogan က ဒီပုန်ကန်မှုဟာ တူရကီစစ်တပ်သန့်စင်ရေးလုပ်နိုင်အောင် ဘုရားသခင်က ပေးလာတဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့အာဏာ ပိုမို ခိုင်မာရေးနဲ့ စစ်တပ်ကိုသာမက သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ တခြားသူတွေကိုပါ ရှင်းတော့မယ်လို့ အကဲခတ်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
အခု စစ်သား ၃၀၀၀ လောက် ဖမ်းထားပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၅ ယောက်နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ၂၉ ယောက်တို့ကိုလည်း ရာထူးဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းရာမှာ ဒီအရာရှိကြီးတွေ ပါ မပါ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီလုပ်ရပ်မျိုး နောင်ကျဉ်သွားအောင် သေဒဏ်ပေးတာကို ပြန်သုံးနိုင်ဖို့ ဥပဒေ ပြင်မယ်လို့တောင် ၀န်ကြီးချုပ် Vinali Yildirim က ဆိုနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သောကြာနေ့ အာဏာသိမ်းမှုဟာ ချက်ခြင်းပဲ ကျရှုံးသွားတာဆိုတော့ နောက်ထပ် ဒါမျိုး ထပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အများကြီး အလှမ်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။
သောကြာနေ့က ကြိုးပမ်းမှုမှာ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်တပ်အတွင်းမှာရော၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပါ ထောက်ခံမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ Erdogan ကို ဝေဖန်နေသူတွေကတောင် တူရကီမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာ များလှပြီဆိုပြီး ရှုတ်ချခဲ့ကြတာပါ။ ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ တပ်မှူးကြီးတွေကလည်း လက်မခံကြပါဘူး။
အဖမ်းခံရတဲ့ စစ်သားတချို့ကဆိုရင် သူတို့ဟာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု တခုခုရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပြီး၊ သမ္မတထောက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုးတော့မှ အာဏာသိမ်းတာပါလားလို့ သိခဲ့ရပါသတဲ့။
လန်ဒန် Chathan House ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့က Fadi Hakura က ဒီအာဏာသိမ်းမှုမှာ မစခင်က ပြိုကွဲနှင့်ပြီလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
ကြံစည်သူတွေဟာ ပါလီမန်၊ သမ္မတနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်အိမ်တွေ၊ စစ်ဌာနချုပ်တွေကို ဦးတည်ခဲ့ကြပြီး၊ Bosphorus ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ထားတဲ့ တံတားတွေနဲ့ Ataturk လေဆိပ်ကို ပိတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုဂ္ဂလိကအသံလွှင့်ဌာနတွေနဲ့ တခြားဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကို ပိတ်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် သမ္မတ Erdogan ဟာ သူ့ကို ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူလူထုဆီ ဆက်သွယ်ညွှန်ကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကြံစည်သူတွေ အဓိကမှားယွင်းမှု ၂ ချက်ကတော့ -
၁. ဘာမှမလုပ်ခင် အစိုးရအကြီးအကဲကို ဖမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကွပ်မျက်လိုက်ရမှာ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။
၂. တင့်ကား၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ဂျက်လေယာဉ် စတာတွေ ၀င်မစွက်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ စစ်မဟာဗျူဟာ ကျွမ်းကျင်သူ Edward Luttwack က Foreign Policy မဂ္ဂဇင်းမှာ သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်။
အဲ အခုတော့ သမ္မတ Erdogan ဟာ တူရကီနိုင်ငံရေးကို စိတ်တိုင်းကျ ချယ်လှယ်ဖော်ဆောင်ခွင့် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။